Maitiro ekuisa Ubuntu pane USB kuti ishande 100% | Linux Addicts
Maitiro ekuisa Ubuntu pa USB saka inoshanda 100% sezvainoita pane hard drive
Sezvatinoziva tese, uye kunyangwe tichireva masisitimu anoshanda nezita rimwechete, Linux ndiyo kernel paari ese. Iwo masisitimu ari GNU/Linux, asi isu tichangotaura izvozvo mukupfuura pano nhasi. Chinotifadza ndechekuti kune akawanda akawanda masisitimu anoshanda uye kugovera kwakavakirwa paLinux, uye imwe yeanonyanya kufarirwa ndeiyo yakagadzirwa neCanonical. Ndichiri kuishandisa nguva nenguva, ndine pachikamu pane laptop, asi chero bedzi isingakundikane, ini zvino ndinoshandisa Manjaro. Kutaura nezve kugoverwa kwakakurumbira kwakavakirwa paArch Linux, mugadziri wayo ndiCalamares, uye zvese zviri nyore pane neUbiquity. Saka kana tichida isa Ubuntu pane USB, tinofanira kungwarira kana kuita mamwe manomano.
Imwe yeaya manomano, uye akachengeteka, ndeyekuimisa kubva kuGNOME Mabhokisi, sezvakangoita Ndakatotsanangura mubhurogi redu mukoma Ubunlog. Yakagara ichindishandira, asi kazhinji pane dambudziko duku: panotanga, haiwanzowana kernel, iyo inokwana kubvisa pendrive uye kuiisa zvakare; ipapo hongu inozviona uye zvese zvinoshanda zvakajairika. Ndiwo mutengo wekubhadhara wekusaisa mungozi chero chinhu mukuiswa kwedu kwagara. Asi zvinogona kuitwa neimwe nzira, zvishoma zvine njodzi asi zvinosiya Ubuntu pane pendrive ichimhanya kunge takaisa pahard drive.
1 Dambudziko: Ubiquity inoona zvikamu zvese uye haipe sarudzo
1.1 Isa Ubuntu pane USB
Dambudziko: Ubiquity inoona zvikamu zvese uye haipe sarudzo
Sezvatataura, Calamares inoita kuti zvinhu zvive nyore. Kana panguva yekuisa tinoratidza pendrive senzvimbo yekuenda, ichaita zvose zvinogadziriswa kuitira kuti tigone kuzviita, uye haina kurasikirwa. Izvi hazvisizvo neUbiquity, uko nzira iri nyore yekuisa Ubuntu yakaiswa pane pendrive ingave bvisa hard drive usati watanga chirongwa chekuisa. Izvi zvinogona kunge zviri nyore pakombuta yeshongwe, sezvo ingori tambo "dhonza" kure, asi hazvisi nyore pane mamwe malaptop emazuva ano uko kuwana hard drive uye zvimwe zvinhu zvinongowanikwa kune nyanzvi kana anonyanya kubata.
Isa Ubuntu pane USB
Saka kwete, isu hatisi kuzodzikisa hard drive. Zvatichaita kunyengedza Ubiquity kuti ufunge kuti hapana chikamu chine hukama nebhutsu chainoda kugadzirisa. Nzira yacho yaizova sezvizvi:
Isu tinogadzira Live USB. Pano paLinux Addicts pane akati wandei tutori, asi izvozvi ndingakurudzira kushandisa mhepo o Balena Etcher.
Tinotanga kubva ku USB. Kuti tiite izvi, kutanga tinofanira kuwana BIOS uye kushandura kurongeka kwemadhiraivha ebhoot, kana zvimwe zvingangoita boot kubva pakaoma dhirairi. Iyi nhanho inogona kuva yakaoma, asi kwete nokuti ndiyo, asi nokuti kombiyuta imwe neimwe ine BIOS uye zvingasarudzwa nenzira yakasiyana uye hazvingaiti kutaura pamusoro pazvo zvose.
Kana uchibhura kubva ku USB, isu tinofanirwa kusarudza mutauro wedu uyezve "Edza Ubuntu".
Muchinhanho chinotevera ndicho chinyengeri, chakaenzana nekudzikisa muviri hard drive. Isu tinovhura dhirowa yeapp, inogona kuve nekudzvanya kiyi yeMETA (Windows) uye tsvaga GPart. Iyo inowanzouya muUbuntu Live Session, asi kana zvisiri izvo, isu tichavhura terminal tonyora.
sudo apt kugadzirisa sudo apt kuisa gpart
Iye zvino tinovhura Gparted.
Isu tinosarudza hard drive, komputa.
Isu tinya kurudyi pane partition iyo iwe une sarudzo boot, esp wobva wadzvanya Manage Options.
Isu tinodzima iyo boot (y esp) . Izvi zvinowanzowedzera imwe, iyo msftdataasi tinozvisiya zvakadaro.
Kubva zvino zvichienda mberi, zvese zviri nyore. Isu tinobatanidza USB kwatinoda kuisa Ubuntu (*).
Isu tinodzvanya kaviri paUbuntu installer icon.
Isu tinosarudza mutauro, tinoutaurira kuti ndeupi rudzi rwekuisa rwatinoda, zvishoma kana tine pendrive ine nzvimbo shoma kana yakazara kana tine zvakawanda, uye tinoenderera mberi kusvikira chidzitiro chaonekwa chinotiudza maitiro ekuisa system.
Isu tinosarudza "Zvimwe" uyezve "Ramba", panguva iyo zvikamu zvese zvichaonekwa.
Mune yekudonha-pasi menyu pazasi, painoti ndeupi mudziyo wekusarudza wekuisirwa bootloader, tinosarudza kwatinoenda USB.
Munzvimbo yekuenda USB, dai tisina kumbozviita, tinodzima zvikamu zvese zviripo, tichidzvanya pane yekubvisa chiratidzo (-) bhatani.
Zvino, isu tinosarudza poindi painoti "Yemahara nzvimbo" uye tinya pane yekuwedzera chiratidzo (+).
Pano tinogona kuita zvakajairwa: gadzira chikamu cheIMBA, imwe yehurongwa uye imwe yekuchinjanisa, asi pa USB ini handingaite zvakanyanya. Ini ndaingogadzira chikamu che500mb ndochimaka sechikamu cheEFI. Mushure meizvozvo, taizodzokorora nhanho yechigumi neshanu kugadzira Ext15 kupatsanura nenzvimbo yegomo pamudzi (/).
Isu tinodzvanya OK uye enderera, nekudzvanya "install izvozvi" uye kubvuma kukurumidza.
Isu tinopedza iyo yekuisa maitiro, tichizadza muminda yenguva zone, mushandisi, password, nezvimwe.
Tinomirira, uye tinomirira kwekanguva. Kuiswa paflash drive kazhinji kunotora nguva yakareba, kunyangwe zvishoma pane kana taizoisa Windows :P
Pakupera kwekuiswa, chenjera neizvi, hatifanire kutanga patsva. Hatisi kukanganwa chimwe chinhu here? Isu tinofanirwa kudzosera nhanho 4. Kuti tiite izvi, tinovhura Gparted, tinosarudza hard drive yekombuta yedu, tinya pane chikamu chinozove chine chinyorwa msftdata, tinochinyora se. esp and the boot, kana isina kutariswa otomatiki.
(*) Iyo pendrive inofanira kunge yakanaka. Zviri nani kukanganwa nezve USB 2.0 nekuti kumhanya kuchatambura zvakanyanya. Iwe unofanirwa kusarudza imwechete USB 3.0, uye kana ichigona kuva 3.1, zvese zviri nani. Izvo zvakakoshawo kuimisa pane flash drive yeinenge 32GB.
Uye ndizvo zvose. Iye zvino tinogona kushandisa Ubuntu sekunge yakaiswa pane hard drive, kana sekunge takashandisa Calamares, izvo zvinoita kuti zvese izvi zvive nyore.
Izvo zvakakosha kuti titaure kuti, kunyangwe iyi nzira yekuisa Ubuntu pane pendrive inofanirwa kuve yakachengeteka, kushandura mireza kunogona kuve kwakatetepa, saka munhu wese ane mhosva yezvaanoita kana chimwe chinhu chikatadza. Zvingodaro, ma backups asati aitwa aya haana kumbokuvadza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuisa Ubuntu pa USB saka inoshanda 100% sezvainoita pane hard drive
Mhoroi, ndine iyo ichishanda seizvi palaptop ine hard drive yakaputsika, ndakaisa Lubuntu 18.04 pane 16 gb usb, inoshanda zvikuru.
Pindura kuna Octavio
Asi hazvina kufanana kuisa uye kuita kuti Lubuntu ishande zvakafanana neUbuntu.
Iyo USB vhezheni haina kuvimbiswa kukurumidza.
Lubuntu yedingindira rakareruka kana uchishanda pa usb uye zvishandiso zvaunazvo, hongu ndinoda Xubuntu zvimwe.
Kukosha kweungwaru hwakavhurika
Restic, chishandiso chakanakisa che backups ine vhezheni uye Cloud rutsigiro